आँखाले, के छेक्ला रहर.....? (भिडियो सामाग्री ) - नवलपुर प्रेस
आँखाले, के छेक्ला रहर…..? (भिडियो सामाग्री )
दयाराम आचार्य ३१४ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर १८, शनिबार (१ महिना अघि)
कावासोती । उनी आँखाले देख्न सक्दैनन् । उनका लागि सबै समान । नदेखेको दृष्य, मन निराश भए चारैतिर समस्या, मन प्रफुल्लित हुँदा सबै तिर हर्षका वातावरण । आँखाले देख्ने रहर यसै रह्यो तर आवाजले आफूलाई देखाउने ,चिनाउने रहर बाँकी छ रिम घर्ती मगरलाई । कावासोती १ हात्तीखोर निवासी रिम घर्ती जो पूर्ण दृष्टिविहिन छन् । तर उनमा आँट ,साहास छ र हिम्मत छ ।
रिमलाई आफैले केही गर्ने रहर छ । रहर हुनु स्वाभाविक हो । तर यसका लागि अन्य साङ्ग भन्दा कयौं गुणा संघर्ष उनले गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीक रुपमा केही काम गर्ने योजनामा रहेका घर्तीलाई गायन क्षेत्रमा चिनाउने रहरले पछिल्ला केही समयदेखि दौडाउन थालेको छ । उनी कहिले काही गाउँघरमा रोधी बस्दा खैजरीको तालमा कौडा गाउँदा रात बिताउँछन् र कहिले पाखाहरुमा सुसेल्दै गुनगुनाउदै हिँड्छन् लोक भाखाहरु ।
सानैबाट गीत गाउने गरेको बताउने घर्ती दोहोरी गाउन समेत खप्पिस रहेका छन् । केही समय दोहोरी साँझमा समेत काम गरेका उनले भोलिका दिनमा के हुने हो भन्ने आफै अनुमान लगाउन सक्दैनन् । तर गाउछु भन्ने आँट भने छ । नवलपुरमा हुर्किएका दृष्टिविहिन भएपनि गाउन अन्य जिल्लामा समेत जाने गरेका छन् । पूर्ण दृष्टिविहिन भएका उनले कसैले सहयोग गरिदिए सहज हुने आश गर्छन् । गीत गाउने रहर उनले केहीलाई नसुनाएका पनि होइनन् । विदेश रहने आफ्ना साथीभाईबाट सकारात्मक प्रतिकृया आएको भएपनि उनको रहरले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन् । कुनै दिन ति सहयोगी हातहरू अघि बढ्लान र गुञ्जीएलान रिम घर्तीका स्वर र मेटिएलान् उनका रहर ।
भिडियो सामाग्रीको लागि यो लिङ्कमा जानुहोस ।